कथा : अबगाल | PaniPhoto
कथा : अबगाल
paniphoto / March 5, 2022 / No Comments
उसको जन्मदर्तामा भएको नाम कसैलाई थाहा छैन । कसैलाई जानीराख्न आवश्यक नै परेन ।
उसलाई नियमित खोप लगाइएन । अस्पताललाई उसको नाम थाहा भएन । ऊ स्कुल गएन, स्कुलले उसको नाम सोधेन । उसलाई गाउँको बिहे, व्रतबन्ध जस्ता शुभकार्य वा अन्य अनुष्ठानमा कसैले निम्तो गर्दैन, निम्तोपत्र लेख्नेले उसको नाम जानिराख्नै परेन ।
तर ज्याद्रो थियो ऊ । नियमित खोप नलाएरै पनि पोलियो, भ्यागुते, दादुराहरूले छोएनन् । स्कुलका कक्षामा नछिरे पनि खेल्दाखेल्दै चौरभरि दगुर्न छोडेन । सरस्वती पूजामा एक फाँको बुनिया र चिउराकै लोभमा भए पनि सफा गर्न स्कुलका छतहरूमा चढ्न आनाकानी गरेन । गाउँभरको पूजा, बिहे र मरिमराउमा पुग्न निम्तो कुरेर बसेन । अरुले गरिरहेको काममा सघाउन आफ्नो सम्बोधन पर्खेन ।
यसो त गाउँमा ऊ एकपल्ट स्कुलको कक्षामा छिरेको हल्ला छ । हल्लाको घटना छ ।
स्कुलको चौरमा फुटबल चल्दै थियो । त्यो शनिबारको दिन हुने भाले प्रतियोगिता थियो, जसमा एकैदिनमा केही टिमहरूले नकआउट खेलहरू खेल्थे र फाइनल जित्नेले गजबको भाले पुरस्कार जित्थ्यो । पुरस्कारको भालेमा अरु केही भालेहरू थपिन्थे र बेलुकादेखि अलिक अबेरसम्म कुखुराका साना साना टुक्राहरू आगोमा पोलिन्थे । स्वादले चपाइन्थे । बियर र रक्सीको खोलो नै त होइन, कुलोसम्म बग्थ्यो भन्न सकिन्छ । छेउमा भएका केटाकेटीहरूले पोलिएका मासु थोरबहुत चाख्न पाउँथे ।
यस्तो उत्सवमा ऊ छुट्ने कुरै थिएन । कार्यक्रमका केही काम आफूले गरिदिएमा भरे अलिकति धेरै मासु पाइने लोभमा ऊ फर्‍याकफुरुक गरेर यता र उता गर्दै थियो । खेल सुरु भए पछि एकातिरको गोलपोस्टको पछाडि उ ढुक्कैले उभियो । त्यतातिर आउट भएको बल दौडिएर तत्कालै किपरसम्म ल्याइदिन्थ्यो ।
हेर्दा लाग्दैन थियो कि ऊ भरे केही खान पाउने लोभमा काम गर्दैछ, बरु मैदान भित्रका खेलाडीले भन्दा बढी रमाइलो गर्दैछ जस्तो पो देखिन्थ्यो । उसको रमाइलो लोभलाग्दो थियो । त्यसमा मिसिन अरु केटाकेटी पनि थपिन खोज्थे । तर तिनले देख्थे, छेउकै कक्षाकोठाको झ्यालमुनि कसैले पहिले नै दिसा गरेको छ । नदेख्नेलाई उसैले भन्थ्यो, ‘त्यहाँ कसले हो हगेको छ । टेक्लाओ है ।’
त्यसपछि रमाइलो गर्न त्यहाँ पुगेका केटाकेटीहरू माथि चौरतिरै उक्लिन्थे । केहीबेरमा नै कोही केटाकेटी त्यतापट्टि जान खोजेनन् । चाउरेलाई फोहोर र सफाको फरक थाहा थिएन । गोलपोस्ट पछाडि ऊ एक्लै भयो । बाहिर आएको बल एक्लै समात्यो । एक्लै रमायो ।
खेल चाँडो सुरु हुनुमा उसको फूर्तिको ठूलो भूमिका थियो । ऊ बल लिन अलिकति ढिलो गर्‍यो भने रेफ्रीले जोड जोडले सिठी फुकेर हतार लाउँथ्यो । त्यतैतिर भएका दर्शकहरू ‘चाँडो कुद्, चाँडो कुद्’ भनेर हौस्याउँथे ।
प्रतियोगिता सकियो । हारजित भयो । बेलुका सधैं जस्तो मासु र रक्सी चल्यो । उसले पनि मनग्गे मासु खायो ।
भोलिपल्ट जब स्कुल सुरु भयो । कक्षा ६ का विद्यार्थीहरू कक्षामा छिर्नै सकेनन् । पढाउन गएका सर पुगेपछि उनले देखे, पल्ला बिग्रिएको झ्यालको ठ्याक्कै मुनि दिसा छ । र, त्यही झ्यालबाट छिरेर कक्षाका निकैवटा मेचमाथि दिसा गरिदिएको छ । दृष्य घिनलाग्दो छ । गन्ध खपिसक्नु छैन ।
‘कुन चै मरेछ ?’ सरले नाक थुन्दै भने ।
‘चाउरेले हो सर,’ कुनै विद्यार्थीले भन्यो, ‘हिजो फुटबल गेम हुँदा त्यो मात्रै यता थियो । उसैले हुनु पर्छ ।’
अरु कोही केही बोलेनन् । हिजो पहिले नै त्यहाँ कसैले दिसा गरिसकेको थियो भनेर जान्नेहरूले पनि मुख खोलेनन् । चाउरेलाई अबगाल लाउने विद्यार्थी अबेर गरेर खेल हेर्न गएको भएर चाउरे एक्लैलाई देखेको भनेर कसैले सम्झाएन । जस्तो कि, मुख खोलेर ‘चाउरेले होइन’ भन्दा खर्च हुने जति शारीरिक ऊर्जा पनि चाउरेको सफाइका लागि खर्च गर्नु महंगो पर्छ ।
ऊ स्कुलको कक्षा पनि छिर्छ भन्ने स्कुलले र पूरा गाउँले सोचेको बेला यही थियो । कसैले पनि सोचेनन् कि त्यो ऊ नहुन सक्छ । आरोप लाउने बालकले हिजो गोलपोस्टबाट बाहिरिएको बल समाउन नपाएको बदला आज तिरेको पनि हुन सक्छ ।
चाउरेले झ्यालबाट छिरेर कक्षाकोठाका डेस्कभरि दिसा गरिदियो, गाउँमा हल्ला चल्यो ।
चाउरे उसैको नाम हो । कुनै बेला उसको नाम नसम्झिने गाउँले यस्ता सानातिना फट्याइँमा उसको नाम सबैभन्दा पहिले सम्झिन्थ्यो ।
अस्ति भर्खर जेठमा न्यौपानेको घरमा सुकाएका लुगा हराए । कसले लग्यो भन्ने हल्लीखल्ली भयो ।
‘चाउरेले हुनु पर्छ । अघि बिहान यतै आएर लिची दे कि लिची दे भन्दै थियो,’ अर्जुन न्यौपानेले शंका गर्‍यो ।
तर उही अर्जुन न्यौपानेले भोलिपल्ट झाङमा अड्किरहेका लुगा भेट्यो । हावाले उडाएर एकै पोको पारेको रहेछ । उसले चाउरेले लगेको रैनछ भनेर कसैलाई सुनाएन । अर्जुन न्यौपाने निश्चिन्त थियो, मलाई किन अबगाल पारिस् भनेर चाउरे निहुँ खोज्न आउँदैन थियो । यस्तोमा ऊ आफैंलाई बेकारमा किन हिजो झुट बोलेछु भन्दै हिंड्नु थियो र !
तर चाउरेले सुकाएका लुगा चोर्छ भन्ने हल्ला गाउँमा फैलिसकेको थियो ।
बोटमा नै पाकेको कटहर भुइँमा झरेछ । दानाहरू छरपस्ट भएछन् । कसले गर्‍यो ? चाउरेले । चाउरे जन्मिनु अगाडि पनि पाकेका कटहर भुइँमा झर्थे भन्ने सारा गाउँले बिर्सियो सायद । चाउरे नभएको अर्को गाउँमा पनि कटहरहरू यसरी नै झर्छन् कि भन्ने गाउँले वास्ता गरेन ।
तर चाउरेले बोटबाटै फलहरू चोर्छ भन्ने हल्ला गाउँमा फैलिसकेको थियो ।
गाउँलाई यस्ता बेला रमाइलाका लागि, दोष थोपर्नका लागि नाम चाहिन्थ्यो, त्यो नाम हुन्थ्यो- चाउरे । उसलाई किन चाउरे भनिन्थ्यो ? देख्नेले सहजै थाहा पाउन सक्थे ।
उमेर भन्दा पनि सानो थियो ऊ । सानामा खुराक पुगेन । खुराकले फुकाउनु पर्ने जति बाँकी शरीर नफुकिबस्यो । उसलाई चाउरे बनाइदियो ।
चाउरेका बाबुआमासँग बस्नका लागि घर थिएन । उसलाई जतासुकै सुताइदिए । हावापानीले सोझै हान्यो र खियाएर उसलाई चाउरे बनाइदियो ।
आमा सुस्तमनस्थितीकी जस्ती थिइन् । एकोहोरी । रुँदै गरेको चाउरेलाई बोकेर सारा गाउँ घुम्थिन् तर दूध चुसाउनु पर्छ भन्ने होसै हुन्थेन । कुन होसले दूध चुसाओस् ? आमाको बेहोसीले उसलाई चाउरे बनाइदियो ।
उसको बाउ सधैंको जँड्याहा । अलिअलि भएको पैसा ऊ आफैंलाई रक्सी खानै पुग्थेन । कुन बचतले छोरोलाई खुवाओस् ? बाउको जँड्याहा बानीले उसलाई चाउरे बनायो ।
तराईको मैदानमा फैलिएको गाउँ हो यो । यहाँ मान्छे खेतिपाती गर्छन् । अरु गाउँहरूमा जस्तै केही मानिसहरू विदेशसम्म पुगेका छन् । केही यतै मौसमी व्यस्त हुन्छन् र बाँकी समय बरालिन्छन् । उनीहरूलाई खान, लाउन र अरुभन्दा अब्बल छु भनेर देखाउन मात्रै पाए पुग्छ । त्योभन्दा बढी अरु कुरामा गाउँ जिम्मेवारी चाहँदैन । आफ्नै छातीमा हुर्किरहेको एउटा अबोध बालकलाई गाउँले देखेन । देखिहाले पनि एकदुई पल्ट च्व च्व भन्दा बढी केही गरेन । गाउँले उसलाई हुर्काउने जिम्मेवारी लिएन । गाउँको सनातन चलनले उसलाई चाउरे बनायो ।
र, चाउरे हुनुका सबै कारणहरूलाई खारेज गरेर उसका विरुद्धमा अनेक अबगाल लगाउँदै गाउँले पटकपटक हल्ला चलाइरह्यो ।
चाउरेले झ्यालबाट छिरेर कक्षाकोठाका डेस्कभरि दिसा गरिदिन्छ । चाउरेले सुकाएका लुगा चोर्छ । चाउरेले बोटबाटै फलहरू चोर्छ आदि आदि ।
सानो चाउरे हरेक हल्लाप्रति प्रतिक्रियाविहीन थियो । गरोस् पनि के !
त्यही चाउरे १६/१७ वर्ष पुगेको बेलाको कुरा हो । गाउँमा बिहे थियो । भर्खरै पहाडबाट झरेका कार्की दाइले छोराका लागि पहाडकै बुहारी खोजेका थिए । जन्तीलाई लैजान रिजर्भ गरिएको बस अघिल्लो दिन सम्साँझै आँगनमा ल्याएर सिंगारिएको थियो ।
बिहानको ३ बजे अँध्यारोमा हिँडेको गाडी ७ बजेतिर तमोरको मूलघाट पुग्यो । जन्तीले त्यहीँ चियानास्ता गर्नेवाला थिए । सबै ओर्लिए पछि पो देखियो, चाउरे ङिच्च गर्दै बसको छतबाट ओेर्लिंदैछ । उसलाई हेरेर सबै जना बेस्मारी हाँसे ।
बेहुलाका बाले उसका लागि पनि सबैलाई जस्तै चियानास्ता मगाइदिए । उसले सबैजनासँग चियानास्ता खान पायो । बसका सबै सिटहरू जन्तीले भरिएका थिए । खलासी भाइले दुई तिरका सिटबीचको प्यासेजमा मुडा राखिदिए । चाउरे मुडामा बस्न पाए पछि दंग पर्‍यो ।
बिहेघरमा जन्ती भएरै पुग्यो । यति हो कि पहाडमा बसबाट ओर्लिए पछि बेहुलाको लुगाकपडा भएको ठूलो लगेज दुई घण्टासम्मको उकाली ओरालीमा बोकेर ऊ एक्लैले बेहुलीको घरसम्म पुर्‍याएको थियो । मैदानको सम्ममा हिंडिरहेका जन्तीलाई आफ्नो ज्यान मात्रै बोक्न पनि भारी भइरहेको थियो । सबैलाई बहाना भइहाल्यो ।
असिन पसिन भएको उसलाई देखेर कसैले एक मिनेट पनि साथ दिएन । मानौँ, चाउरे नभएको भए बेहुलाको लगेज बसमै छोडिन्थ्यो । मानौँ, कसैले मंगलसुत्रसम्म बोकेर जग्गेसम्म पुर्‍याउन सक्दैन थियो । मानौँ, चाउरे नभएको भए बिहे रोकिन्थ्यो ।
तर चाउरेले गुनासो गरेन । बगिरहेका पसिना भन्दा बढी उसको उमङ्ग उर्लिएको थियो । पुग्ने बित्तिकै पाएको एक मग मोही सास नफेरि पिइसकेको थियो । भोज खाने बेलामा अरुले उक्साए पछि सोल्टीनी भन्दै छिल्लिएको थियो । जोसजोसमा नै ऊ आँगनमा बेढंगले नाँचिरहेको थियो ।
ठ्याक्कै त्यही बेला, चाउरे नाँचिरहेको भागमा आएर एकजना पलेटी कसेर बस्यो ।
जन्तीहरूले चाख मानेर हेर्न थाले । दुलही गाउँका मान्छेहरू चनाखा भए । अकस्मात्, पलेटी कसेर बसिरहेको मान्छे आफ्नै टाउकोलाई घडीको घण्टा सुइ जस्तो वरीपरी घुमाउन थाल्यो । बिस्तारै टाउको घुमाउने क्रम बढ्दै गयो । ऊ मिनेट सुई जस्तो भयो र सेकेन्ड सुईलाई जित्दै चाँडो चाँडो टाउको घुमायो । अनि बसीबसी सारा शरीर उफार्दै बुरुकबुरुक गर्न थाल्यो र नबुझिने गरेर फलाक्न थाल्यो ।
‘देउता चढ्यो । देउता चढ्यो । मने धामीलाई आज पनि देउता चढ्यो,’ धेरै जनाले ठूलो स्वरमा हल्ला गरे ।
‘चोखोनितो भएन । चोखोनितो भएन । चोखोनितो भएन । चोखोनितो भएन,’ मने धामीले धेरैपल्ट यसो भन्दै कामिरह्यो ।
दुलहीकी आमाले हतार हतार पूजा कोठाबाट धुपौरो निकालिन् । दौडँदै गएर भोजका परिकार तताउन राखेको अँगेनोबाट राताराता कोइला निकालिन् । राता कोइलाले धुपौरो भरिए पछि फेरि उत्तिनै बेगमा घरभित्र छिरिन् र घरैमा बनाएको गाईको शुद्ध घिउ धुपौरोमा हालिन् ।
घिउ चटट् आवाज बनाएर कोइलामा नै बिलायो । छेउमा भएको मुठीमा अट्ने जति उठाइन् । अक्षता र धुपौरो लिएर दुलहीकी आमा आँगनमा निस्किइन् । तर मने धामी बसिरहेको ठाउँमा थिएन । नबुझिने गरेर के के फलाक्दै जग्गे वरिपरि घुम्दै थियो ।
‘कसैले समातेर यहाँ ल्याओ न,’ बेहुलीकी आमाले गुहार गरिन् ।
चाउरेले गएर मने धामीको हात समायो । मने धामी कामिरह्यो, फलाकिरह्यो तर प्रतिकार गरेन । चाउरेले तान्दै उसलाई आँगनको बीचमा ल्यायो ।
‘क्षमा होस् । क्षमा होस् ।’ चाउरेसहित त्यो मान्छेलाई घुम्दै गर्दा बेहुलीकी आमा पटक पटक भन्दै थिइन् । मने धामीलाई उनले झटपट अक्षताको टीका लगाइदिइन् । हातमा दक्षिणास्वरूप केही नोटहरू राखिदिइन् । चाउरेले ध्यान दिएर हेर्‍यो । १०० का केही नोटहरू थिए ।
‘भित्र फलफूल ल्याइदेओ त ।’ ढोकाबाट हेरिरहेका युवतीतिर हेर्दै बेहुलीकी आमाले ठूलो स्वरमा भनिन् ।
अनि, मने धामी काम्ने क्रम कम हुँदै गयो । केहीबरेमा ऊ सामान्य अवस्थामा फर्कियो । बेग्लै थालमा ल्याइदिएको फलफूल लिएर मने धामी कान्लाबाट तलतिर ओर्लियो ।
‘गाउँका जान्ने धामी हुन् । जे रोग पनि चटक्कै पार्छन्,’ बेहुलो डराएको देखेर बेहुलीले खुसुक्क भनिन्, ‘चोखोनितो नभए यस्तो हुन्छ ।’
अनि बेहुलो सामान्य अवस्थामा फर्कियो । मने धामी गएसँगै बिहेघर पनि सामान्य अवस्थामा फर्कियो । तर, चाउरेलाई मने धामीले पाएको पैसा र फलफूल विशेष लाग्यो । ऊ निकैबेरसम्म मने धामी गएतिर लोभिएर हेरिरहेको थियो ।
बिहे सकेर बेहुलीसहित जन्तीहरूको फर्किने क्रम सुरु भयो । दाइजोमा आएको काठको दराज बोक्ने जिम्मा चाउरेको भागमा पर्‍यो । पटक पटक बिसाउँदै उकालो र ओरालो गराउँदै चाउरेले बससम्मै दराज ल्याइपुर्‍यायो ।
बस राखेको ठाउँसम्म पुग्न लाग्दै गर्दा बेहुलाका बाउले नै चाउरेलाई जिस्काए, ‘तँलाई त निम्तो नि थिएन । आफैं आइस् । अब बाटोमा पुलिसले चेक गर्छ र निम्तो नभई बिहेमा जानेलाई समाएर जेल हालिदिन्छ ।’
सबैले होमा हो मिलाए । चाउरेले सुरुमा त हाँसेर टार्न खोज्यो तर केहीबेर पछि घोसेमुन्टो लाएर उभिरह्यो ।
बस भए ठाउँमा पुगे पछि दाइजोमा आएका सामानहरू बसको छतमा लादियो । छतमा चढाउन सबैभन्दा गाह्रो चाउरेले ल्याएको दराज नै भयो । अरु गाडीमा चढ्दा चाउरे पानीको बोतलबाट घट्घटी पानी पिउँदै थियो । बस छुट्ने बेलासम्म अँध्यारो भइसकेको थियो । चाउरे कता बस्यो भन्ने कसैले याद पनि गरेन ।
हिंड्दै अँध्यारो भइसकेकाले बाटोमा बस कतै पनि रोकिएन । बिहेमा खाएर र नाँचेर थाकेकाले कसैले बस रोक्न पनि भनेनन् । सबैलाई घर पुगेर ओछ्यानमा लड्न हतार भइसकेको थियो । त्यसमाथि माघको चिसोले सबैको हतारमा आकस्मिकता पनि थपिदिएको थियो । ६ घण्टाको यात्रा पछि बस जन्ती लिएर बेहुलाको घरमा पुग्यो । रातिको १२ बजिसकेको थियो ।
सामान झार्न छत्रे निरौला र विक्रम मगर छतमा चढे । चाउरे त दाइजोमा दिएको गुन्टा भित्र पसेर निदाइरहेको रहेछ ।
‘लन्ठु ! यहाँ पो लुकेको रैछ ।’ छतमा सामान झार्न चढेको छत्रे निरौलाले भन्यो ।
बिक्रम मगरले बेस्मारी त होइन तर सुतेको मान्छे झस्किने गरेर लात हान्यो । चाउरे झस्किएर उठ्यो । के भइराछ भन्ने बुझ्न वरिपरि हेर्‍यो । छतमा भएको अरुलाई देख्यो । बिजुली गएको बेला पनि चम्किरहेको बिहे घर देख्यो । अनि मात्रै आफू छतमा भएको हेक्का पायो ।
जुरुक्क उठेर यताउता केही खोज्यो र लडिरहेको एउटा झोला समात्यो । झोला भरिएको थियो तर त्यसमा के थियो भन्ने बाहिरबाट हेरेर थाहा पाउन सकिंदैन थियो । कसैले केही सोध्नुभन्दा अगाडि नै ऊ बसबाट ओर्लिवरि आफ्नो घरतिर दौडिसकेको थियो । अन्धकारमा चाउरे लुसुक्कै हरायो ।
‘त्यसैलाई सामान झार्न लाएको भए पनि हुने रैछ,’ बिक्रम मगरले अहिले पछुतो मान्यो ।
छतमा चढेकाहरू होससँगले सामान झार्न थाले । दराज सबैभन्दा पहिले झारियो । त्यसपछि गोडा धुन राखिएको खड्कुलो झारियो । अनि खाट र अरु अरु सामानहरू । सामान झार्ने क्रममा नै छत्रे निरौलाले चाउरेले सुत्नलाई बिगारेको गुन्टा उठाउन खोज्यो ।
‘बजियाले गुन्टाभरि मुतेर मरेछ,’ उसले ठूलो स्वरमा चिच्यायो । उसले लपक्कै भिजेको तन्ना हातले च्याप्पै समातेको थियो ।
जन्ती गएका केही हासेँ । सुनेर नै बिहे घरकाले सिकसिको माने । दाइजोको सामान बिग्रिएकोमा अलिकति खिन्न मानेको जस्तो पनि देखियो ।
‘भोलि भोज खान आउँदा गाला फुट्ने गरेर दिनु पर्छ,’ अँध्यारोमा कसैले बोल्यो ।
छत्रे निरौलाले बसको छतबाट पिसाबले भिजेको गुन्टा बन्द्रयाङ्ग तल फ्यालिदियो । चाउरेले आफू सुत्न सजिलो बनाउन गुन्टाको पोको खोलेको रहेछ । तन्ना अँध्यारोमा अलिकपर अनि सिरक डसनाको पोको गाडीकै छेउमा खस्यो ।
गुन्टाबाट उछिट्टिएको तन्ना तल बसेर बसको छतमा हेरिरहेको कैलाशको टाउकोमा पर्‍यो । भिजेको भागले उसको अनुहार लपक्कै छोप्यो । पिसाबको चिसोसँगै कसैले देखेर गिल्याउला कि भन्ने अफ्ठ्यारो बढ्यो । उसले झटपट टाउकोबाट तन्ना हटायो । चाउरेको पिसाब परेकोमा दिङमिङ मान्यो । र, निश्चित गर्न भिजेको हात नाक नजिक लगेर एक फेरा हावा विस्तारै नाक भित्र तान्यो ।
मान्छेको पिसाब गनाएको थिएन ।
‘मुत होइन रैछ, पानी रहेछ,’ यति सोचेर कैलाश ढुक्क भयो ।
तन्नालाई गुन्टाको अरु सामान भए ठाउँमा राखिदिन उठायो । यसपटक पनि उसले तन्नाको भिजेको भाग नै समात्यो तर यस पटक पहिले जस्तो दिङमिङ भएन ।
‘चाउरेले दाइजोको गुन्टामा नै मुतेछ ।’ अझै पनि केही मान्छे यसो भन्दै हाँस्दै थिए । तर कैलाशले होइन रहेछ भनेर स्पष्टीकरण दिएन ।
गुन्टा चाउरेको पिसाबले भिजेको थियो कि पिउनलाई राखेको बोतलबाट पानी पोखिएको थियो भन्ने कसैले सोचेन । बरु सबैलाई चाउरेले झोलामा के लग्यो भन्नेमा चासो थियो । दुई पल्टसम्म छतमा चढाएको सामानहरूको रुजु गरियो ।
सबै सामान ज्युँकात्युँ ओरालिएका थिए । झोलामा अट्ने गरिको सामान छतमा चढाएको कुनै सामान थियो भन्ने कसैलाई थाहा पनि थिएन । अनि सबैले चाउरेको झोलाबाट आफ्नो ध्यान मोडेर मुतेको भनिएको गुन्टामा नै पुर्‍याए ।
भोलिपल्ट भोजमा आएका हरेक गाउँलेले दाउजोको गुन्टामा चाउरेले मुतेको खबर थाहा पाए । अलिक अबेला गरेर चाउरे बिहे घरमा आइपुग्यो । उसले गुन्टा मुतेको खबर सुनेका केटाकेटीहरूले उसलाई हेरेर हाँस्न थाले ।
‘थुइक्क बेइज्जती ! पिसाब लागेको छ भनेर भन्न सक्दैनस् थिइस् ?’ भोजको लाइन लागेको देखे पछि रणबहादुर लोहार करायो ।
‘माइतीले दिएको सामान कति चिज हुन्छ । तर यसले मुतिदिएर सबै बिगारिदियो । लाज पचाएर खानलाई अहिले लाइनमा बसेको छ’ दुलाल्नी भाउजुको रिस बढ्यो, ‘हालिद्‍याओ न मुखमा भाँडो नै । खाओस् ।’
दुलाल्नी भाउजुसँगै लागेर कराउनेहरू बढे । चाउरेलाई भोजका परिकार थालमा भरेर हिंड्न झन् हतारो भयो । उसले लाइनमा अगाडि भएकालाई हातले थोरै धकेल्यो ।
‘नधकल्,’ उसको अगाडि सन्तोष थापा रहेछ, च्याँठियो । बिहेमा चिटिक्क परेर आएको उसलाई चाउरेले छोएको नै मन परेन ।
चाउरे ङिच्च गर्‍यो । बोलेन । तर चाउरे भोज खाने टेन्टमा छिरे पछि उसलाई कराउने र हेर्दै हाँस्नेहरूको हल्ला चर्को भएको थियो । त्यहीमाथि सन्तोष थापाले चाउरेलाई नधकल् भनेर कराए पछि भर्खरै टेन्टमा छिरेर चाउरे भन्दा पछि परेको लालबहादुर तात्तियो ।
‘भाग्,’ चाउरे भोजको लहरै राखेको खानाको पहिलो परिकारसम्म पुगिसकेको थियो तर त्यति बैले लालबहादुरले भन्यो, ‘हिजो गरेको फट्याइले पुगेन र अहिले आएर यहाँ हल्लाखल्ला गर्दैछस् ?’
गाली गर्दै नजिकै आएको लालबहादुरलाई देखेर चाउरे डरले लत्रकै भयो । लालबहादुर चाउरे भन्दा उमेरमा जेठो मात्रै थिएन, खाइलाग्दो थियो । स्कुलको चौरमा बेलुका बेलुका कराँते सिक्थ्यो । लालबहादुरको गालीमा चाउरेले प्रतिक्रिया दिनु भनेको पिटाइ खानु भन्ने हुन्थ्यो । र, त्यो भन्दा भयानक भोजको खाना पनि खान नपाउने हुन सक्थ्यो ।
खानाको त्यति नजिकै आइपुगेको ऊ खाना गुमाउन चाहँदैन थियो । यसैले ऊ लालबहादुरतिर ध्यान नदिई खाना सकेसम्म चाँडो लिन अघि बढ्यो । आफू भन्दा अगाडि चाउरेले डाडु समाएको लालबहादुरले कसरी सहन्थ्यो र ? चाउरेले डाडु के समाउन लागेको थियो, उसले चाउरेको सर्टमा समातेर लाइनबाट तान्दै टेन्ट बाहिर निकालिदियो ।
‘भाग् । छैन तेरो लागि यहाँ केही पनि ।’ खुट्टा तन्काएर घुच्चुकमा एक लात बजारे पछि लालबहादुरले भन्यो ।
कराँते सिकेकै मान्छेबाट भए पनि घुच्चुकमा एक लात खानु चाउरेका लागि त्यति पीडादायक थिएन, जति त्यत्रो खानाको ठ्याक्कै नजिकैबाट तानिएर बाहिर निकालिनु थियो । ऊ अझै पनि खाना तिर हेर्दै थियो ।
‘हिजो झोलामा के चोरेर लगिस् ?’ राति जन्तीबसबाट झोला लिएर भाग्दै गरेको देखेको छत्रे निरौला त्यहीँ आइपुगेछ । चाउरेलाई देख्नेवित्तिकै केरकारमा उत्रियो । छत्रे निरौलालाई राति नै दुईपल्टसम्म सामान रुजु गराएको थाहा थियो तर चाउरेले के ल्याएछ भन्ने जान्ने उत्सुकता कायमै थियो ।
चाउरे केही बोलेन ।
‘पुलिस ल्याएर यसलाई ठेगान नलाइ भएन,’ छत्रे निरौला भाम रिसाएझैं गर्‍यो ।
‘इस्कुस् ।’ पुलिस सुन्नेवित्तिकै सानो स्वरमा चाउरे बोल्यो, ‘बिहे घरबाट फर्किदा बाटोमा टिपेको ।’
‘अहिले जे भने पनि भो नि,’ छत्रे निरौला बोल्यो । सायद केरकार पुगिसकेको थियो तर अन्तिम सजाय स्वरूप उसले पनि एक लात बजार्‍यो र भन्यो, ‘भाग् ।’
तर चाउरे भागेन, बरु भोज लगाएको टेन्ट भन्दा अलिपर उभिरह्यो । मान्छेहरू टेन्टभित्र पसेको र आफूले खाएको जुठो थाल बाहिर धारामा राख्न ल्याएको हेरिरह्यो । अनि के सोच्यो कुन्नि, फनक्क फर्किएर पछाडि नहेरि हिंड्यो ।
‘बिहे भोजमा झगडा गरेर चाउरेले झन्डै भोज बिथोल्यो,’ गाउँमा हल्ला चल्यो ।
चाउरे भागेको ठ्याक्कै ६ महिनापछि औँशीको मिर्मिरे बिहानी हुनु भन्दा पनि निकै अगाडि, पौडेलबाको ठुलो कुखुराको भाले सबै भन्दा पहिले ‘कुखुरी काँ’ भन्नु भन्दा पनि पहिले, गाउँको मन्दिरमा दोहोरो ठ्याङ्ग्रो बज्न थाले ।
गाउँमा कुनै धामी थिएन जसले मन्दिरमा ठ्याङ्ग्रो बजाओस् । औँशीको रातको अनेक कथाकिस्सा सुनेको गाउँ त्यो झिस्मिसेसम्मै डरायो । अनवरत बजिरहेको ठ्याङ्ग्रो किन बज्यो भनेर बाहिर निस्किएर खोजेन ।
अलिकति उज्यालो भए पछि, निधार खुम्च्याउँदै आँखा चिम्रा बनाउँदा मान्छे बलैले चिनिने जस्तो भए पछि मात्रै गाउँलेहरू आफ्नो जस्केलोबाट बाहिर निस्किए । मनमनै डर बोकेर भारी चालले उत्सुकतावश गाउँलेहरू मन्दिरतिर सोझिए ।
देखे, एउटा ठ्याङ्ग्रो ठोक्दै गरेको चाउरे थियो । कुनै जान्ने धामी झैँ काम्दै र फलाक्दै थियो । र, अर्को धामी त्यही थियो, जो बिहेघरमा चोखोनितो गरिनस् भन्दै कामेको थियो । अर्थात, मने धामी ।
‘देउता उत्रिनलाई देउताले मेरो चेलोलाई दुःख दियो ।’ धामीले ठ्याङ्ग्रोको लयमा मिलाउँदै भन्यो, ‘अनि मेरो चेलोले गाउँलेलाई दुःख पनि दियो होला ।’
‘हो प्रभु हो,’ केही गाउँलेले तत्कालै सहमति जनाए । अबगाल मात्र नै सही तर चाउरेका चोरीका र फट्याइँका किस्सा सबै गाउँलेलाई थाहा थियो ।
ठ्याङ्ग्रोको लय उस्तै राख्दै धामीले थप्यो, ‘अब मेरो चेलो पनि देउताको मान्छे भयो ।’ चाउरे त्यति बेला मन्दिरको अर्को भागतिर बेस्मारी काम्दै थियो ।
त्यसदिनदेखि चाउरे गाउँलेको लागि चाउरे धामी भयो । गाउँको मन्दिर चाउरे धामीको पूजा गर्ने ठाउँ बन्यो । एकदुई कार्जेहरूमा खान पुगेको चाउरे धामी चोखोनितो नभएको भन्दै काम्न थाल्यो । अनि, गाउँको पूजापाठहरूमा चाउरेका लागि चोखोनितो खाना बन्न थाल्यो ।
त्यसपछि गाउँमा चोरी, फट्याइँ, दुःखबिमार जस्ता जे बिगार् हुन्छ, खोजी गर्ने वा निको पार्ने चाउरे धामीकै थाप्लोमा आउँछ । र, अबगाल देउतालाई पर्छ ।
अनलाइनखबरमा २०७८ फागुन २१ गते प्रकाशित भएको थियो ।